Nepali Christian Bible Study Resources - जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग २)
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? #२
बुद्धिमान् व्यक्तिहरूसँग सल्लाह खोज्नुहोस् ("बुद्धिपूर्ण सल्लाहद्वारा" हितोपदेश २४:६)।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरूले परमेश्वरको वचन जानेका हुन्छन् - बाइबलीय तरिकामा बुद्धिमानी सल्लाह खोज्दा हामी मानवीय राय चाहन्नौं; हामी बाइबलीय जानकारीमा आधारित बुद्धि चाहन्छौं। हामी कुनै मान्छेको वचन खोजिरहेका छैनौं तर परमेश्वरबाटको वचन खोज्दैछौं। यसकारण हामीले बाइबललाई परिश्रमसाथ अध्ययन गरेका विश्वासीहरूबाट सल्लाह खोज्नुपर्छ। बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू आत्मिक रूपमा पाको हुन्छन् र बाइबलमा जानकार हुन्छन्।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू खाँटी शिक्षा जानेका र विचार मिल्ने खालका हुन्छन्। नव-इभान्जेलिकलहरू वा क्यारिज्म्याटिकहरू वा क्याल्भिनवादीहरू वा अझै उदारवादी र रोमन क्याथोलिक वा शिक्षामा एकै मन नभएका अरूहरूसित सल्लाह खोजेर कतिपय बाइबलीय घरपरिवारकाहरूले गलत निर्णयहरू गर्न पुगेका छन्। अमेरिकामा गर्भपतनलाई वैधानिक तुल्याउने `रो विरुद्ध वेड' (Roe vs. Wade) नामक अमेरिकाको राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाको प्रतिपक्षी नोर्मा मक्कोर्भी (Norma McCorvey) को दुःखद उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्। तिनी गर्भपतनको विरुद्धमा उठीन् र कुनै एक "इभान्जेलिकल" अगुवाबाट बप्‍तिस्मा लिइन्; तर गर्भपतनको विरुद्धमा आवाज उठाउने सिलसिलामा क्याथोलिक पादरीहरूसितको उनको घनिष्टतामार्फत पछि गएर उनी रोमन क्याथोलिक चर्चलाई स्वीकार गर्न पुगिन्।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरूले आफ्नै जीवनमा असल निर्णय गरेका हुन्छन् र उनीहरूको चरित्र असल र स्थिर खालको हुन्छ। ("विश्वासघाती मान्छेमाथि भरोसा" हितोपदेश २५:१९) नगर्नलाई बाइबलले चेताउनी दिन्छ)। अल्छी गर्ने व्यक्तिहरू, तिर्नुपर्ने ठाउँमा नतिर्नेहरू, झूट बोल्नेहरू, ठग्नेहरू, अस्थिर स्वभाकाहरूले असल सल्लाह दिनेछैनन्। विशेष गरी युवाहरूले यसलाई ध्यानमा राख्‍नुपर्छ। वचनले युवालाई बाबुआमाको आदर गर्नुपर्छ भन्दछ, तर बाबुआमाहरू असल चरित्रका छैनन् भने तिनीहरू बुद्धिमान् सल्लाहकार होइनन्। मानसिक र आत्मिक रूपले अस्थिर मान्छेलाई पनि एक अर्थमा "विश्वासघाती मान्छे" को वर्गीकरणमा राख्‍न सकिन्छ। मेरा बाबु यस वर्गमा पर्नुहुन्थ्यो किनकि दोस्रो विश्व युद्धमा प्रशान्त महासागरका टापुहरू (प्यासिफिक आइल्याण्डस्) मा भिडन्तमा पर्नुहुँदा उहाँको मस्तिष्कमा दीर्घकालीन असर पुग्‍न गएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई कहिल्यै ठीक भएन र बारम्बार उहाँलाई मानसिक अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्‍यो। उहाँले प्रभुलाई चिन्नुहुन्थ्यो तर कुनै पनि भार वहन गर्न वा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न उहाँ असक्षम हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ठीक सोच्न सक्‍नुहुन्नथ्यो। परिणामस्वरूप हाम्री आमा र हामी छोराछोरीहरूले कतिपय समयहरूमा उहाँको आशीर्वाद नखोजीकनै कामकुरा गर्न सिक्नुपर्‍यो। जस्तै, उहाँ कुनै पनि काममा स्थिर रहन सक्‍नुहुन्नथ्यो त्यसैले परिवारलाई धान्न आमा काममा जानुपर्ने भयो। अरू विकल्पै थिएन तर बाबुले यस कुराको ज्यादै विरोध गर्नुभयो। उहाँ काम गर्न सक्‍नुहुन्नथ्यो र उहाँले कमाउन सक्‍ने कुनै सम्भावनै थिएन, तर आमाले काम गरेको पनि उहाँ चाहनुहुन्नथ्यो। अन्तमा आमा आफै अघि सर्नुभयो अनि प्रभुले आशिष दिनुभयो र उहाँले विवाहअघि काम गर्नुभएको टेलिकम कम्पनीमा काम पाउन सक्‍नुभयो अनि विस्तारै बाबुलाई यसको बानी पर्न थाल्यो। सामान्य अवस्थामा पत्‍नीले त्यसो गर्नु त विद्रोह हुन्थ्यो तर यस अवस्थामा त्यो विद्रोह थिएन। २३ वर्षको उमेरमा मैले मुक्ति पाएपछि म बाइबल कलेज जान चाहेँ र सेवाकार्यको निम्ति तालिम लिन चाहेँ। बाबुले यसको विरोध गर्नुभयो। प्रभुले मलाई इसाई पुस्तकहरू लेख्‍न अगुवाइ गर्नुभयो। बाबुले यसको विरोध गर्नुभयो। बाबुको इच्छा थियो मैले आफ्नो घरतिरै बसेर कतै काम गरोस्। म एकदम खुशी छु कि मैले मानसिक गडबडीले ग्रस्त हुनुभएका मेरा घाइते बाबुलाई नभएर प्रभुलाई पछ्याएँ। बाबुआमाको सल्लाहको विरुद्धमा कहिलेकाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो निर्णय गर्नु नै छ भने त्यो हल्कारूपमा कहिल्यै गरिनुहुन्न।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरूसँग तपाईंको विशेष परिस्थितिको सम्बन्धमा बुद्धि हुन्छ। खेतीपातिको सल्लाह चाहिँदा तपाईं डाक्टरकहाँ जानुहुन्न। वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सल्लाह चाहिँदा तपाईं सफल वैवाहिक जीवन भएको व्यक्तिकहाँ जानुहोस्। सुसमाचार प्रचारमा आफ्नो पूरै जीवन बिताउने बारेमा सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक अनुभवी मिसनरीकहाँ जानुहोस्। एउटी असल विश्वासी आमाले चार्ल्स स्पर्जनलाई प्रचारक नबन्नलाई सल्लाह दिएका रहेछन्। तर वास्तवमा एउटी स्त्रीले प्रचारक हुनु भनेको के हो खास बुझ्न सक्दैनन्, यद्यपि उनी एक ज्यादै आत्मिक स्त्री हुन सक्छिन्। स्पर्जन लेख्छन्, "मलाई राम्ररी याद छ, एउटी आत्मिक म्याडमले मलाई प्रचारकको काममा हात नहाल्नलाई भरमग्दुर प्रयास गरिन्; सक्दो इमानदारीता र धैर्यतामा मैले उहाँको रायको लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरें — तर उहाँको भन्दा फराकिलो अनुभव भएकाहरूको फैसला नै बढी वजनदार ठहरियो" (सी एच स्पर्जन, लेक्चर्स् टु माइ स्टुडेन्ट्स्)।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू सत्य कुरा बोल्न तयार हुन्छन् (हितोपदेश २७:६) - हामी जे सुन्न चाहन्छौं त्यो सुनाउनेहरूबाट मात्र सल्लाह लिन खोज्छौं, वा नरम-नरम मात्र बोल्ने, हामीलाई फुर्क्याउने, कठीन विषयहरूलाई एकातिर पन्छाएर कुरा गर्नेहरूबाट मात्र सल्लाह खोज्छौं भने, हामी समय खेर फाल्दैछौं। हामी त्यस्ता सल्लाहकारहरू खोजौं जोहरूले हामीलाई जे जस्तो भए पनि सत्य कुरा बताउँछन्। विश्वासीले आफूले सुन्न चाहेको कुरा सुनाउनेसँग मात्र सल्लाह लिनु भनेको ऊ परमेश्वरको इच्छाको बारेमा गम्भीर नभएको प्रमाण दिनु हो। हामीलाई अगमवक्ता मीकाया जस्तो सल्लाहकार चाहिन्छ (१ राजा २२:२७) जसले दु:खै भोग्‍नु परे तापनि सत्य कुरा बोल्न पछि हटेनन्। त्यसैले हो, दुष्ट राजा आहाबले गुनासो गरेका थिए, "म तिनलाई घृणा गर्दछु किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगमवचन कहँदैनन्, तर सधैं खराबी मात्र" (१ राजा २२:२७)। आहाबलाई चाहिने सल्लाहाकार मिकाया नै थिए तर त्यो जान्न सक्‍ने बुद्धि आहाबसित थिएन।
एकजनाभन्दा बढीसँग सल्लाह खोज्नुहोस् ("जहाँ धेरै सल्लाहकार हुन्छन्" हितोपदेश ११:१४; २४:६)।
फेरि, "धेरै सल्लाहकारहरू" पाइने सर्वोत्तम ठाउँ परमेश्वरको भय मान्ने, बाइबल विश्वास गर्ने मण्डली हो। बाइबल कलेजको बारेमा स्पर्जनले व्यक्त गरेको कुरा एउटा ईश्वरीय मण्डलीको सवालमा झनै सान्दर्भिक छ: "यहाँ हामी एकसाथ भेला हुन्छौं, प्रार्थनामा सँगै हुन्छौं, कुराकानीमा, विभिन्न माण्डलिक कामकाजको सिलसिलामा हामी एक आपससँग समय बिताउँछौं जसले गर्दा हामीले एक-अर्कालाई चिन्न सक्छौं, नापजोख गर्न सक्छौं, एकअर्काका कमजोर तथा बलियो पक्षहरू जान्न सक्दछौं। एउटा बुद्धिमान् मानिसले धेरैजनाको अर्थात् बहुमतको, सल्लाह, निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्नलाई अलिक ढिला-सुस्ती नै गर्नेछ।" (सी एच स्पर्जन, लेक्चर्स् टु माइ स्टुडेन्ट्स्)।)
विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सल्लाह लिँदा हामी कुनै एउटै व्यक्तिको इच्छाको दास बन्नबाट जोगिन्छौं। सन् १९७० को दशकको "पेन्टेकोस्टल गोठाला अभियान" (Pentecostal Shepherding Movement ) को भूल यही थियो। उनीहरूको शिक्षा अनुसार हरेक विश्वासी जनले आफूलाई मण्डलीद्वारा नियुक्त गरिएको एउटा "गोठालो" को अधीनमा सुम्पिनुपर्छ। उक्त "गोठालो" सित सल्लाह नलिईकन कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो। यसको परिणाममा त्यहाँ अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइयो। मण्डलीका गोठालाहरू, शिक्षकहरू र चेला बनाउनेहरू महत्त्वपूर्ण सहायकहरू हुन्, तर विश्वासीको एउटै मात्र मालिक हुनुपर्छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
मैले एउटा चेतावनी दिनैपर्छ कि "धेरैजना सल्लाहकारहरू" ले गोलमाल पनि ल्याउन सक्छ यदि ती सल्लाहकारहरू परमेश्वरको भय मान्ने, बाइबलीय तरिकामा बुद्धिमान र शिक्षामा एकै मनका छैनन् भने!
युवाहरूका लागि प्रथम सल्लाहकारहरू उनीहरूको आफ्नै बाबुआमा हुनुपर्छ, विशेष गरी बाबुआमा विश्वासी हुन् भने (एफेसी ६:१-३)। दोस्रो स्थानमा सल्लाह खोजिनुपर्ने मण्डली अगुवाहरूबाट हो। परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई अगुवाहरू दिनुहुन्छ: उनीहरूको देखरेख गर्न, उनीहरूलाई सहायता गर्न, जसरी एउटा गोठालाले भेडाहरूसित व्यवहार गर्दछ। ईश्वरीय मण्डली अगुवाहरू "तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छन्" (हिब्रू १३:१७)। उनीहरूले मण्डलीका जनहरूको बारेमा विचार गरिरहन्छन्, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहन्छन्, हरेकको लागि सर्वोत्तम कुरा चाहन्छन्, र परमेश्वरले उनीहरूलाई विशेष बुद्धि दिनुहुन्छ।
एकजना पास्टरको अवलोकनअनुसार "हरेक सल्लाहकार सल्लाह दिन छिटो हुँदैन। इमानदार भईकन, खोजी-खोजी एक बुद्धिमान व्यक्तिबाट सल्लाह उघाएर निकाल्नु सल्लाह खोज्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी हो। प्रायः बुद्धिमान गनिने व्यक्तिहरू हतार-हतार सल्लाह प्रदान गर्ने गर्दैनन्।"
परमेश्वरलाई छोडेर मान्छेमा भरोसा गर्नु वा मान्छलाई ऊ मानो परमेश्वर भएझैं अन्धो रूपमा उसलाई मान्नु मूर्तिपूजा हो (यर्मिया १७:५-८)। हो, परमेश्वरले हामीमाथि अधिकारीहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्न शिक्षकहरू दिनुहुन्छ र तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर अन्तमा हाम्रो भरोसा परमेश्वरमाथि हुनुपर्छ, र हामीले उहाँबाट नै बुद्धि प्राप्‍त गर्नुपर्छ। बिल गोथार्ड (Bill Gothard) को "अधिकार" ("chain of authority”) भनिने धारणाअनुसार जेसुकै कुरा किन नहोस्, अधिकारीले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ अरे, तर यो बाइबलसम्मत छैन। हामीले उहाँलाई भन्दा बाबुआमालाई समेत बढी प्रेम गर्दछौं भने हामी उहाँको चेला हुन अयोग्य हुन्छौं भनेर येशूले भन्नुभयो (मत्ती १०:३७)। यसकारण यो स्पष्ट छ, त्यस्तो बेला पनि आउँछ जब हामी अधिकारीको मागभन्दा बिपरितमा चल्नुपर्ने हुन्छ। कुन अवस्थामा? त्यो अवस्थामा जब उनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनले देखाएको उहाँको इच्छाबिपरित लैजान खोज्दछन्। हामीले मानिसको भन्दा परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नुपर्छ भनेर प्रेरितहरूले सिकाए (प्रेरित ५:२९)। हाम्रो मण्डलीको पहिलो विश्वासीहरूमध्येमा एकजाना चाहिँ टीनएज केटी थिइन्। तिनका हिन्दू बाबुआमा र दिदीहरूले उनलाई मण्डली जान मनाही गरे, तर तिनले ख्रीष्टलाई पहिलो स्थान दिइन् र परमेश्वरको वचनलाई मानेर आफूले पाएका सबै अवसरहरूमा मण्डलीमा उपस्थित भइन्। फलस्वरूप उनको पूरै परिवार प्रभुमा आएका छन्। हामीले अधिकारीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ तर ख्रीष्ट नै हाम्रो प्रथम र एकमात्र मालिक हुनुपर्छ। पहिल्यै हामीले भनिसक्यौं, मुख्य कुरा हामी बेरियालीहरू बन्नुपर्छ र सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले जाँच्नुपर्छ (प्रेरित १७:११)।
"धेरै सल्लाहकारहरू" पाइने सबभन्दा उत्तम स्थान कुन हो?
« जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग १)
जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग ३) »